चिनेजानेकै व्यक्तिबाट कार्की परिवारको ह,त्या भएको प्रहरीको अनुमान, एकजनालाई मा’र्न खोज्दा अरुले देखेपछि लखेटी-लखेटी ह,त्या – Classic Khabar
September 9, 2021 153
संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोला गाउँमा भएको ह,’त्या प्रकरणमा प्रहरीले ह,’त्यारा चिनेजानेकै व्यक्ति भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार परिवारका एक सदस्यको ह,’त्यापछि आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले अरु सदस्यको पनि ह,’त्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्ति चिनजानकै भएका कारण कार्की परिवारका ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीको ह,’त्यापछि परिवारका अन्य प्रत्यक्षदर्शीको पनि ह,’त्या भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । घटनास्थलको सुक्ष्म अनुसन्धानपछि प्रहरीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
श’व फेला परेको ‘लोकेसन’, श’वको प्रकृतिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रहरीले ‘क्रा,इम सिन’ का आधारमा ‘एक जनाको मात्र ह,’त्या गर्ने उद्देश्य भए पनि परिवारका अन्य सदस्यले देखेपछि पहिचान खुल्ने डरले ह,’त्याराले ६ जनाकै ह,’त्या गरेको हुनसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो । तेजबहादुरलाई मा’रेको देखेपछि अन्यमाथि आ,क्र,मण आशं’का – घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रहरीका अनुसार ह,’त्याराले सबैभन्दा पहिले तेजबहादुरलाई आ’क्र,मण गरेको हुनसक्ने देखिएको छ ।
सो दिन बारीमा खेताला बोलाएकाले तेजबहादुर बिहानै घरबाट निस्किएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । तेजबहादुरको गोडामा बुट जुत्ता पनि भेटिएकाले उनी बिहानै कामका लागि निस्किएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । तेजबहादुरको श,व भेटिएको स्थान घरबाट करिब २५० मिटर टाढा रहेको र त्यहाँबाट चि,च्या,उँदा घरका मानिसहरुले सुन्न सक्ने देखिन्छ ।
ह,’त्यारा बाटोमा कुरेर बसेको वा खोल्सीमा जम्काभेट हुँदा तेजबहादुरमाथि आ,क्र’मण भएको हुनसक्ने प्रहरीले बताएको छ । जब तेजबहादुरमाथि आ,क्र’मण भयो, त्यसपछि उनी चि,च्याएको र चि,च्याएपछि तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जना दौडिँदै घटनास्थलतर्फ गएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
तेजबहादुरमाथि आ,क्र,मण गरिरहेको अवस्थामा ह,’त्यारालाई तेजबहादुरकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जनाले देखेपछि उनीहरुलाई पनि आ,क्र’मण गरी ह,’त्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । कमला र रञ्जनालाई पनि आ,क्र’मण गरेपछि उनीहरु पनि कराएको र विपिन र गोमाले सुनेपछि उनीहरु पनि त्यतै गएको प्रहरीको अनुमान छ ।
ह,’त्यारालाई विपिन र गोमाले पनि चिनेका कारण उनीहरुलाई पनि ल,खे’टी ल,खेटी ह,’त्या गरेको हुनसक्ने ‘क्रा’इम सिन’ले बताएको प्रहरीको भनाइ छ । किनभने तेजबहादुरको गोडामा बुट जुत्ता हुनु र अन्यको गोडामा सामान्य चप्पल हुनुले उनीहरु सबै घरभन्दा बाहिर नै भएको अवस्था देखिएको प्रहरीको ठम्याई छ ।
तेजबहादुरकी ८४ वर्षीय आमा पार्वती कार्की भने घरमै कुँडो पकाइरहेकी थिइन् । तर घटनाबारे पार्वतीले पनि थाहा पाएको हुनसक्ने भन्दै उनको पनि घरमै गएर ह,’त्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीले बताएको छ । तर तेजबहादुरका बुवा वौद्धमान कार्की भने कान नसुन्ने र सुतिरहेका कारण घटनाबारे थाहा नपाएको भन्दै ह,’त्याराले उनलाई भने केही नगरेको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ ।
घटना बिहान ५ देखि ५ः ४० को बीचमा, टार्गेटमा तेजबहादुर मात्रै !- प्रहरीका अनुसार घटना बिहान ५ बजेदेखि ५ बजेर ४० मिनेटको बीचमा भएको देखिन्छ । किनभने घटना भएको दिन तेजबहादुरले आफ्नो बारीमा खेताला बोलाएका थिए । त्यसकारण तेजबहादुर बिहान ५ बजे नै बारीमा जान प्लाष्टिकको बुट जुत्ता लगाएर हिँडेका थिए । तर बाटो कुरेर बसेका वा जम्काभेट भएका ह,’त्याराले आ वेगमै तेजबहादुरमाथि आ,क्र,म’ण गरेको हुनसक्ने घटनास्थलको अध्ययनले बताएको प्रहरीको भनाइ छ ।
Prevएमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पहिला किन भेट्दै छिन् ओलीलाई ?
Nextआहा ! छोरिले अनितालाई यसरी गालामा माया गरेपछि अनिताले पनि छोरिलाई गालामा माया गर्दै (हेर्नुस् भिडियो )